Miyuu kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos kula biiri doonaa Lionel Messi Kooxda Paris Saint-Germain?? – Gool FM
(Madrid) 05 Jan 2021. Sida wararku ay sheegayaan xiddiga kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa la la xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo horyaalka Ligue 1 ee Faransiiska.
Warsidaha El Chiringuito ayaa warinaya in Kabtanka Kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos uu u furan yahay inuu Lionel Messi kula biiro Kooxda Paris Saint-Germain oo doonaysa saxiixa xiddigan reer Argentina.
Los Blancos ayaan wax dalab ah oo heshiis kordhin ah weli hordhigin Ramos, qandaraaskaasoo uu ku sii joogayo garoonka Santiago Bernabeu, marka loo eego sida ay haatan wax u socdaanna waxa uu ku bixi doonaa beeca xorta ah suuqa xagaaga.
Messi ayaa xaalad la mid ah tan Ramos ay ku haysataa garoonka Camp Nou, iyadoo PSG haatan ay u xusul duubayso sidii ay ku heli lahayd labadaan laacib.
Kooxda haysata horyaalnimada Faransiiska ayaa doonaysa Ramos inuu kula biiro garoonka Parc des Princes ciyaaryahanka lixda goor ku guuleystay Abaal-marinta Ballon d’Or.
"Waxba igama gelin haddii Paul Pogba uu ka tago Manchester United" - Rio Ferdinand